Musasa Wemhuri | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Rarama yakanakisa nguva yemhuri yehupenyu hwako
Musasa wemhuriDzidza, Ongorora, Tsvaga & Kura
6 kuna 17
CHETE ZUVADzidza, Ongorora, Tsvaga & Kura
Yese chirongwa cheMhuri chakabatanidzwa yemisasa yemhuri inokupa iwe nemwana wako chiitiko chakasiyana, zvichikubvumira iwe nemwana wako kuvandudza hunyanzvi hwemutauro muChirungu kana chiFrench.
Zvirongwa zveBLI zvemisasa yemhuri zvinopa chiitiko chakanakira kunze kwenyika kusanganisa kudzidza kweChirungu neyechiFrench pamwe nezvimwe zviitiko zvinonakidza mumamiriro akachengeteka uye ane hanya.
Nguva yechando: Mavhiki maviri kusvika masere / Zhizha: Mavhiki maviri kusvika matanhatu
Nguva yechando: Zvita 15 / Zhizha: June 28
Nguva yechando: Kukadzi 8 / Zhizha: Nyamavhuvhu 8
Iwo makosi akagadzirirwa kutarisa pahunyanzvi hwekutaurirana uye kuvaka chivimbo. Vadzidzi vanopihwa mukana wakawanda wekutaura mukirasi kuitira kuti vakudziridze kugona kwavo kuburikidza nezviitiko zvinoverengeka zvekudzidza zvinonakidza.
Makirasi anozadzwa nemashopu. Ivo kurudzira kuzvimirira kwemitauro, kushandurika. Kushanda nemumwe nemumwe uye neVatungamiriri vekushandira kwavo, vadzidzi vanopihwa chirongwa chekuti chapedzwa vhiki rega rega uye kuratidzwa neChishanu.
Vhiki rega rega tinopa mashopu akasiyana senge:
Vadzidzi vanotora makumi maviri neshanu kana maFrench Zvidzidzo nevadzidzi vane hunyanzvi.
Tamba nhandare yemitambo
Vanopa vadzidzi mukana wekuti vaone nyika nyowani munzira nyowani, kutsvaga zvinhu zvitsva, kuita shamwari nyowani uye kudzidzira hunyanzvi hwavo hweChirungu / chiFrench kunze kwekirasi. Chirongwa ichi chinosanganisira kuzere kwevhiki kushanya kana maviri ezuva- zuva zviitiko mukupera kwesvondo
Pakati pevhiki vadzidzi vanowana nzvimbo dzakaita se:
Vhiki Yekuenda Kunze Sampulu
Ottawa 1 Zuva
Quebec Guta 1 Zuva
Mashiripiti Canada tour
Arbraska Adventure Sango
LaRonde Paki Yekuvaraidza
Montmore hon Falls
Yakagadzirirwa Apartment sarudzo inowanikwa.
Muchirongwa chedu chemhuri, iwe uchagara pazvivakwa zvekugara, fenicha yakarongedzwa iri maminetsi makumi maviri kubva pane yedu main kampasi.
Nzvimbo yekudyira & Kicheni (Firiji, Hovheni, Stovetop, Microwave)
Yese yekugezera Bath (Bath, Shower, Hairstryer, Yemahara Zvimbuzi)
Tea / Mugadziri weKofi
Towel, machira, bepa rechimbuzi
TV, Runhare, Radio
Imba yekuwachira ($)
Airport inotora uye yobva yadonha